पत्नीले यौनसम्पर्क गर्न नदिएको भन्दैं पतीले चक्कुले काटे आफ्नै लिङ्ग ! « The News Nepal
पत्नीले यौनसम्पर्क गर्न नदिएको भन्दैं पतीले चक्कुले काटे आफ्नै लिङ्ग !
काठमाडौं । विवाह एक सामाजिक पक्रिया हो , विवाहपश्चात सामान्यतया यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो मानिन्छ । तपाईले यौन सम्पर्क गर्दा उत्तेजित हुँदा दुर्घटना भएको साय सुन्नु भएको होला । केही समय पहिले उत्तेजित अवस्थामा आउँदा एकजना युवकको लिंग भाँचिन पुगेको थियो । यौन सम्पर्क गर्दा उत्तेजित हुने कुरा फरक हो तर धेरैं त सावधान नैं हुनुपर्दछ ।
आज हामी तपाईलाई यौनसँग जोडिएको विषयमा जानकारी दिदैंछौं । भारतको उत्तर प्रदेशका एक व्यक्तिले आफ्नो लिङ्ग काटेका छन् । उनले आफ्नी श्रीमतीको झोँकमा आफ्नो लिङ्ग काटेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार श्रीमतीले सम्भोग गर्न नदिएपछि घाँसी राम नाम गरेका ब्यक्तिले रिसको झोँकमा आफ्नो लिङ्ग काटेका हुन् ।
घाँसी राम राति रक्सी खाएर घर आएका थिए र श्रीमतीलाई यौनसम्पर्क राखौँ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । घाँसी रामले यौनसम्पर्क राखौँ भनेर प्रस्ताव राख्दा श्रीमतीले अस्वीकार गरेपछी उनले भान्सामा गई चक्कुले आफ्नो लिङ्ग दुई टुक्रा पारेका हुन्।
उनीहरुका दुई छोरा र एक छोरीसमेत छन् । उनीहरुको विवाह भएको १८ वर्ष भइसकेको थियो । एजेन्सी